Umfundaze we-AlhóndigaBilbao owokubhukuda | Izincwadi Zamanje
Umfundaze we-AlhóndigaBilbao owokubhukuda
UJosep Domingo del Calvario "UNadar”, Owinile kuhlelo lwesine lwezincwadi esezihlanganisiwe I-AlhóndigaBilbao yokufunda amahlaya. Le nsizwa yaseCastellón izokujabulela ukuhlala unyaka owodwa “AmaMaison des Auteurs”(Indlu Yababhali) ngu Angouleme (EFrance), esinye sezikhungo zamahlaya esihlonishwa kakhulu, ukusebenzela iphrojekthi yakhe yekhathuni. Ijaji elihlulekile kulesi sifundo siholwa ngu U-Antonio Altarriba, Umklomelo Kazwelonke Wamahlaya ka-2010. Ngalesi sibonelelo, u-AlhóndigaBilbao ufuna ukugqugquzela ukudalwa nokuthanda ukuvela kwamathalente amasha obuchwepheshe emkhakheni wamahlaya.
Bilbao, Julayi xx, 2011. UJosep Domingo “Nadar”, ungumnqobi wehlelo lesine lomfundaze wamahlaya osuhlanganisiwe we-AlhóndigaBilbao. Le nsizwa yaseCastellón yavela kanye nabanye abantu abangama-42 kulolu hlelo lwesine lwezifundo ze-AlhóndigaKomik (esinye sezifundo ezihlonishwa kakhulu futhi eziphelele ngaphakathi kwesimo samahlaya kahulumeni). UDomingo uzoba nethuba lokujabulela umfundaze eNdlu Yababhali (La Maison des Auteurs) e-Angoulême (eFrance), okuyingxenye ye-International City of Comics and Images (isithombe seCité Internationale de la Bande Dessinée et de l ') salokhu Idolobha laseFrance. Ngalesi sibonelelo, u-AlhóndigaBilbao ufuna ukukhuthaza ukudala futhi akhuthaze ukuvela kwamathalente amasha obuchwepheshe emkhakheni wamahlaya. Ukwenza lokhu, ngalolu hlelo, luzoxhasa ngemali ukufezeka kwephrojekthi ekhethelwe izindinganiso zayo zobuciko kanye nobuhlakani bayo obusha. Ezingxenyeni ezintathu zokuqala zalesi sifundo, abantu abangaphezu kwe-120 bethule amaphrojekthi abo ngalesi sifundo, ngaleyo ndlela bahlanganisa ikhwalithi nodumo lwalesi sinyathelo se-AlhóndigaBilbao emhlabeni wezincwadi zamahlaya nokwenziwa kwamahlaya. Ijaji elenze ukhetho, njengoba kwenzekile ezikhathini ezedlule, beliphethwe ngu-Antonio Altarriba, umklomelo wamanje weNational Comic Award weThe Art of Flying, futhi owenziwe ngabachwepheshe abavela emhlabeni wamakhathuni odumo olwaziwayo UMiguel Angel Martin, umdwebi wamakhathuni; UPepe Galvez, umbhali wesikripthi nomhlaziyi wamahlaya; UJesu Moreno, umhleli weSin Sentido kanye USantiago Garcia, umbhali wesikripthi, umhumushi nomgxeki wamahlaya.
Ophumelele uJosep Domingo del Calvario Nada ”(Castelló de la Plana, 1985), uneziqu ze-Fine Arts azithole e-University of Barcelona. Uke wasebenzisana nokushicilelwa okufana nephephabhuku i-“ Dos Times Breve ”futhi, phakathi kweminye imiklomelo, imisebenzi iwine umklomelo wokuqala "umncintiswano wamahlaya we-XXIV Ciutat de Cornellà" (2008), umklomelo wesibili ocingweni luka-2008 lwe-INJUVE scholarships (Institute of Youth of Spain) kanye nomklomelo wokuqala emncintiswaneni wamahlaya we- "XXI Noble Villa de Portugalete ». IsiCatalan UClara-Tanit Arqué ube ngompetha wohlelo lokuqala, isiGalician UMartin Romero, owesibili. Bobabili banikeze e-AlhóndigaBilbao i-workshop "amahora angu-12 ama-Comic", lapho bexhasa khona ababambiqhaza ukuthi basebenze kumakhono abo okuthuthukisa nokwenza ubuciko futhi bathuthukise indaba ecacile ngesikhathi esifushane kakhulu. U-Alvaro Ortiz Wanikezwa isibonelelo sesithathu futhi njengamanje wenza iphrojekthi yakhe yamahlaya ezikhungweni zeLa Maison des Auteurs.
Indlu Yababhali be-Angoulême.
Indlu Yababhali iyisikhungo sokuhlonishwa kwamazwe omhlaba, okunikezelwe kumakhomikhi nobunye ubuciko be-audiovisual (amafilimu opopayi, imidlalo yevidiyo, ... njll.) Futhi emukela ababhali abavela emazweni omhlaba abanikeza imibandela yomsebenzi efanelekayo ekudalweni, ngenhloso yokwenza iphrojekthi yakho ebikhethwe ngaphambilini kuyo. Selokhu yavulwa ngo-2002, iLa Maison des Auteurs yamukele ababhali abangaphezu kwekhulu, abasha nabachwepheshe, abavela eFrance nakwamanye amazwe, ukuthuthukisa amaphrojekthi ahlobene namahlaya. Bonke laba babhali bahlomule ngohlaka lwezinto zokusebenza zamahhala (i-workshop eyodwa noma ehlanganyelwe) enezinto ezidingekayo zokwenza izithombe (isiteshi sekhompyutha, ibhodi yokudweba, isithwebuli, ... njll.). Izikhala ezijwayelekile ezifana negumbi lekhompiyutha nezokubhala kabusha, igumbi lemibhalo, umbukiso negumbi lenkomfa, phakathi kwezinye izinsizakusebenza, nazo zenziwa zitholakale kubemukeli bemifundaze.
Umfundaze we-AlhóndigaBilbao-Cómic unikezwe:
Indawo yokuhlala efulethini isikhathi esingangezinyanga eziyishumi nambili (ugesi, igesi kanye namanzi egameni lomuntu)
Ukufinyelela kwimishini nakuzo zonke izinsiza zeLa Casa de los Autores.
Ama-euro ayinkulungwane ngenyanga isikhathi esilinganiselwe sonyaka owodwa.
I-AlhóndigaBilbao, iyodwa noma ibambisene nomshicileli okhethekile, izocwaninga ukuthi kungenzeka yini ukuthi kushicilelwe iphrojekthi ngonyaka olandelayo wokuphela komfundaze. Ukushicilelwa, uma kukhiqizwa, kuzoba ngesiBasque nangeSpanish. Lesi sinyathelo se-AlhóndigaBilbao siyingxenye yesivumelwano esibanzi sokubambisana esisayinwe ne- "Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l´Image" ukukhuthaza zombili izinhlelo ezihlobene namahlaya kanye nezinye izitayela zokulalelwayo manje ezikhulayo. I-Alhóndiga Bilbao iyisikhungo Sezinsiza Zamahlaya.
Ukuze uthole olunye ulwazi:
Ucingo: 944 01 53 06. Ucingo 646 22 13 01
E-mail: HYPERLINK «mailto: nora@vkcomunicacion.com» nora@vkcomunicacion.com
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Umfundaze we-AlhóndigaBilbao owokubhukuda
Indlu yokushicilela ¡Caramba!
Izindaba ekwethulweni kweXVII Salón del Manga